कहाँ हरायो साढे ३३ किलो सुन ? सनमकी गर्लफ्रेण्ड भन्छिन्- लुटिने सूचना गोरेले पाइसकेका थिए ,, – Ranga Darpan
कहाँ हरायो साढे ३३ किलो सुन ? सनमकी गर्लफ्रेण्ड भन्छिन्- लुटिने सूचना गोरेले पाइसकेका थिए ,,
वैशाख,२१ काठमाडौं – तस्करीको साढे ३३ किलो सुन गायब भएपछि दोस्रो शिकार बनेका थिए, उर्लाबारीका सनम शाक्य । उनी सुन तस्करीका नाइके मोस्टवान्टेड चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ का भरिया र सुनको हिसाबकिताब राख्ने एकाउन्टेन्ट समेत थिए ।
उनै सनमको हत्याबाट सुरु भएको सुन तस्करीको र्‍याकेटको अनुसन्धानले एउटा ठूलो रहस्य सार्वजनिक गरेको छ, ‘नेपालको विमानस्थल सुन तस्करीका लागि स्वर्ग हो ।
हत्या गरियक सुन भरिया सनम शाक्य र सुन मालिक चुडामणि उप्रेती ,,
प्रहरी अधिकारी र विमानस्थलका कर्मचारीसँगको सेटिङमा ४ वर्षमा सहजै करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको रहस्योदघटन भएको छ ।
तस्करलाई सघाउन प्रहरीका उच्च अधिकारीले नै लाखौं रुपैयाँ लिएको खुलेको छ । तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणमा नखुलेको रहस्य चाहिँ गायब भएको साढे ३३ किलो सुन कहाँ छ ? भन्ने हो ।
आखिर कहाँ गयो त सुन ?
९ माघमा यूएईबाट रोहित आचार्य र टेकबहादुर मल्लले नेपाल ल्याएका थिए, सुनका १२ वटा विस्कुट । जुन साढे ३३ किलोको थियो ।
विमानस्थलबाट अनामनगरमा रहेको गोरेको अड्डासम्म सुन पुर्‍याउने जिम्मेवारी विमानस्थलका कर्मचारी सानु वनले पाएका थिए ।
वनसहित तक्ले भनिने पुन्यप्रसाद लामाले विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकालेका थिए ।
तर, अनामनगर आइपुगेपछि मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले उनीहरुबाट सुन लुटेका थिए । र, गोरे समूहका व्यक्तिको दबाव सहन नसकेर वनले विमानस्थल परिसरमै आत्महत्या गरे ।
सनमकी गर्लफ्रेन्ड भन्छिन्- सनमलाई ३ जनाले लुट्ने योजना थियो
यसैबीच, सनमकी प्रेमिका निशा सेन ठकुरीले भने शाक्यलाई ३ जनाले लुट्ने योजना बनाएको बताएकी छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेकी ठकुरीले बयानका क्रममा रमेश श्रेष्ठ, रोशन श्रेष्ठ र आकाश लामा मिलेर सनमहरुलाई लुट्ने योजना बनाएको खुलासा गरेकी छन् ।
त्यसमध्येका रमेश श्रेष्ठलाई सनम र निशाको सम्बन्धबारे सबै कुरा थाहा रहेछ । त्यो योजना बन्नुअघि महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेलसँग निशाको भेट भएको थियो ।
उनलाई रोशनले सञ्जेलसँग चिनजान गराएका थिए । पछि सञ्जेलले नै त्यो योजनाबारे नाइके चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई सूचना दिएको उनले बयान दिएकी छन् ।
निशाले प्रहरी समक्ष दिएको बयान जस्ताको तस्तैः–
उसले नै मलाई सम्पर्क गर्न खोज्थ्यो । तर, उसको फोन पनि उठाउँदिन थिएँ । तर, पछि मेरो र सनमको Whats App मा कुराकानी भयो ।
सोधपुछकै क्रममा गोरेको डरले एयरपोर्टमा सानु वन भन्ने ब्यक्तिले सुसाइड समेत गरेका थिए, त्यसपछि सनम समेत फ्रेबुअरी ३ तारिकमा गाडीमा पूर्व गएका थिए । ऊ पूर्व जानुभन्दा अगाडी मैले मेरो नामबाट उसलाई र मलाई सिम निकाली सनमलाई ९८०८०….. को दिइ मैले ८९०८०…… नम्बरको सिम चलाएकी थिएँ ।
तर, कुरा भएन । फोन उठेन । त्यपछि फोन अफ भयो । त्यसको भोलिपल्ट मार्च ३ तारिकमा मिति २०७४।१०।१९ गते बिहान ८ बजे प्रहरी आएर मेरो लाजिम्पाटस्थित कोठामा खानतलासी गर्‍यो । र, साढे ३३ केजी सुन कहाँ छ ? भनि सोधपुछ गर्न थाल्यो ।
त्यसको १ हप्ता पछाडि सञ्जेल सर र मेरो दरबारमार्गमा भेट भएको थियो, सनमको मृत्यु भइसकेको कुरा थाहा पाएपछि मैले सनमको श्रीमतीलाई फोन गरी सनमको छोरी दिप्सालाई पढाइ दिन्छु भनेकी थिएँ ।आजको अन्लाईनखबरमा समाचार छ ,,
देशैभरि सार्वजनिक यातायात बन्दको प्रभाव, यात्रुको बिजोग,,
नेपालको सविधान प्रति असन्तुस्ट ,नाकाबन्दी गर्ने मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्नु हुन्न, कमल थापा,,